November 2021 - Page2of 48 - MM Daily Life
ပိုင္ရွင္အသစ္ဆီက ေျပးထြက္လာခဲ့ၿပီး သခင္ေဟာင္းထံ သူ႔အား မေရာင္းဖို႔အတြက္ ဒူးေထာက္ေတာင္းပန္ေနတဲ့ ႏြားကေလးရဲ့ ဗီဒီယို…
တိရိ စ္ဆာန်လေးတို့သည် စကားမပြောတတ်သော်လည်း သူတို့၏ သခင်ဖြစ်သူ အပေါ်တွင်ထားရှိသော မေတ္တာနှင့် သံယောဇဉ်တို့ဟာ အတော်လေးကို ကြီးမားလှပါတယ်။ ယခုတွင်လည်း နွားလေးတစ်ကောင်နှင့် သခင်ဖြစ်သူတို့၏ အဖြစ်အပျက်လေးကို မြင်တွေ့လိုက်ရလျှင်အတော်လေးကို ဝမ်းနည်းပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်စေမှာ သေချာပါတယ်။ သခင်ဖြစ်သူဟာ အခြားသူတစ်ဦးထံသို့ နွားငယ်လေးကို ရောင်းချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါ ဝယ်ယူသူများကလည်း နွားလေးကို ခေါ်သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအချိန်တွင်နွားငယ်လေးဟာ ပိုင်ရှင်အသစ် ခေါ်သွားသည့်ကြားမှ သခင်ဖြစ်သူ ထံ အပြေးပြန်လှည့်လာခဲ့ပြီး မရောင်းချရန်အတွက် ဒူးထောက်တောင်းပန်နေခဲ့ပါတယ်။ ပိုင်ရှင်အမျိုးသားဟာလည်း နွားငယ်လေးကို ပွေ့ဖက်ပြီး နှုတ်ဆက်နေခဲ့ကာ ဝမ်းနည်းနေခဲ့ရတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်C rdZawgyi တိရိ စၦာန္ေလးတို႔သည္ စကားမေျပာတတ္ေသာ္လည္း သူတို႔၏ သခင္ျဖစ္သူ အေပၚတြင္ထားရွိေသာ ေမတၱာႏွင့္ သံေယာဇဥ္တို႔ဟာ အေတာ္ေလးကို ႀကီးမားလွပါတယ္။ … Read more
“ ကွယ်လွန်သွားရင် ပိုက်ဆံဆိုတာ ကိုယ့်နောက်မပါဟုဆိုကာ သာသနာကို အကုန်လှူလိုက်တဲ့လင်မယား ”…
ကွယ်လွန်သွားရင် ပိုက်ဆံဆိုတာ ကိုယ့်နောက်မပါဟုဆိုကာ သာသနာကို အကုန်လှူလိုက်တဲ့လင်မယား ” ကွယ်လွန်ရင်ဒါတွေမပါတာသိလို့ ဘာတစ်ခုမှချန်မထားပဲ သာသနာကို အကုန်လှူလိုက်တဲ့လင်မယား ဓမ္မာရုံဆောက်လုပ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သင်လည်း ကွယ်လွန်ရင်ဘာတွေယူသွားမလဲ လောဘ ဒေါသ မောဟတွေများတဲ့ လူ့လောကကြီးထဲ သင်လည်း သေရင်ဘာတွေယူသွားမလဲ ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင်တော့ ကျော်မသွားသင့်ပါ ဒါနကုသိုလ် သီလကုသိုလ် ဘာဝနာကုသိုလ် ဒါတွေသာလျှင်သင်သေလျှင်သင့်အတွက် အထောက်ကူဖြစ်စေနိုင်ပါသည် Credit;.. Zawgyi ကြယ္လြန္သြားရင္ ပိုက္ဆံဆိုတာ ကိုယ့္ေနာက္မပါဟုဆိုကာ သာသနာကို အကုန္လႉလိုက္တဲ့လင္မယား ” ကြယ္လြန္ရင္ဒါေတြမပါတာသိလို႔ ဘာတစ္ခုမွခ်န္မထားပဲ သာသနာကို အကုန္လႉလိုက္တဲ့လင္မယား ဓမၼာ႐ုံေဆာက္လုပ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ သင္လည္း ကြယ္လြန္ရင္ဘာေတြယူသြားမလဲ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟေတြမ်ားတဲ့ လူ႔ေလာကႀကီးထဲ သင္လည္း ေသရင္ဘာေတြယူသြားမလဲ ဗုဒၶဘာသာမွန္ရင္ေတာ့ ေက်ာ္မသြားသင့္ပါ ဒါနကုသိုလ္ သီလကုသိုလ္ ဘာဝနာကုသိုလ္ ဒါေတြသာလၽွင္သင္ေသလၽွင္သင့္အတြက္ အေထာက္ကူျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္ … Read more
စြဲဆိုခံထားရတဲ့အမႈအားလုံးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မက်ဴးလြန္ေၾကာင္းထင္ရွားတယ္လို႔ ေရွ႕ေနေတြသုံးသပ္ အဖမ္းခံေနရတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ သူ႔ကို စြဲဆိုထားတဲ့အမႈေတြအတြက္ ပထမဆုံး စီရင္ခ်က္ခ်တာကို ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ ႀကဳံရႏိုင္ဖြယ္ရွိၿပီး ေနာက္ထပ္အမႈေတြကိုလည္း ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔မွာ စီရင္ခ်က္ခ်ဖို႔ စစ္ေကာင္စီဘက္က စီစဥ္ထားပါတယ္။ အဲဒီအမႈေတြအားလုံးဟာ လုပ္ႀကံစြဲဆိုခ်က္ေတြသာျဖစ္ၿပီး ဒါေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မက်ဴးလြန္ဘူးဆိုတာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ထင္ရွားတယ္လို႔ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံမွာေနထိုင္တဲ့ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးမင္းလြင္ဦးက ေျပာပါတယ္။ ဦးမင္းလြင္ဦးကို RFA ဝိုင္းေတာ္သူ မခက္မာ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။source-RFA စွဲဆိုခံထားရတဲ့အမှုအားလုံးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မကျူးလွန်ကြောင်းထင်ရှားတယ်လို့ ရှေ့နေတွေသုံးသပ် အဖမ်းခံနေရတဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူ့ကို စွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေအတွက် ပထမဆုံး စီရင်ချက်ချတာကို နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့မှာ ကြုံရနိုင်ဖွယ်ရှိပြီး နောက်ထပ်အမှုတွေကိုလည်း ဒီဇင်ဘာ … Read more
ငိုယိုတောင်းပန်ထားတဲ့ စည်သူဝင်းရဲ့စာတွေကို သက်သေအဖြစ်တစ်ခုချင်းစီထုတ်ပြလိုက်တဲ့ မြတ်နိုးအိမ်
ပရိသတ်ကြီးရေ စည်သူဝင်းနဲ့ ခြောက်နှစ်ကျော် လက်တွဲခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးကတော့ လူမှုကွန်ယက်မှာ ဖောက်ပြန်ထားတဲ့ အချက်အလက်တွေကို တင်ပြီး နာရီပိုင်းအကြာမှာပဲ အကောင့်အဟက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ တစ်ချို့ ပရိသတ်တွေကလည်း သူမကို အပြစ်တင် ဝေဖန်နေ တာကြောင့် အတော်လေးကို ပင်ပန်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်က မြတ်နိုးအိမ်ရဲ့ Instagram အကောင့်တွင် အခုလို ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ” မနက်ဖြန်ဆို ခြောက်နှစ်ပြည့်မှာ ပြောတော့ အရမ်းချစ်တယ်ဆို အရင်အမှားတွေအတွက် ပြင်ပြီး နောင်တရတယ်ဆို လက်ထပ်ကြတော့မယ်ဆို နောက်တစ်ယောက်ရှိနေတာတောင် အရမ်းချစ်ပြခဲ့ အရမ်းဂရုစိုက်ပြခဲ့တာတွေက ဟန်ဆောင်ခဲ့တာတွေပဲလား။ အားလုံး မျက်စိစုံမှိတ်ပြီး ယုံမိခဲ့တဲ့ ငါ့အမှားလား နင်ပဲ မင်းသားမို့ဟန်ဆောင်ကောင်းလွန်းခဲ့တာလား? ငါ့ကိုလည်း တစ်ချိန်လုံး love you miss you ပြောတာတွေက တစ်ဖက်ကိုလဲ … Read more
အမျိုးသားတွေရဲ့အသံကို လုံးဝမကြားနိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့အဖြစ်….
အမျိုးသားတွေရဲ့အသံကို လုံးဝမကြားနိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့အဖြစ် နားဆိုတာ အခြားသောသူတွေနဲ့ ရေလည်ရှင်းလင်းအောင်ပြောဆိုတဲ့နေရာမှာ မုချလိုအပ်သလို ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပြောဆိုေနကြတဲ့ အသံတွေကိုလည်း အဲ့ဒီနားရှိမှသာ ကြားသိနိုင်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ တရုတ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ အမျိုးသမီးအသံကိုသာကြားနိုင်ပြီးအမျိုးသားတွေရဲ့အသံကို မကြားနိုင်တဲ့ ရှားပါး အခြေအနေတစ်ခုကို တွေ့ရှိထားပါတယ်။ Chen လို့ခေါ်တဲ့ တရုတ်အမျိုသမီးတစ်ဦးဟာညအချိန် အော့အန်ခဲ့ပြီး သူမရဲ့နားထဲမှာ မြည်သံကြားနေရတာကြောင့် တစ်ခုခုတော့မှားနေပြီဆိုပြီး သူမ သိနေခဲ့ပါတယ်။ မနက်နိုးလာေတာ့ သူမရဲ့ ချစ်သူကောင်လေးအသံကို မကြားနိုင်တော့ပါဘူး။သူမချက်ချင်းဘဲ ဆေးကုသမှုခံယူပြီး ဆရာဝန်က သူမဟာ reverse-slope hearing loss ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူမက အသံကြယ်လောင်စွာပြောမှသာ ကြားနိုင်တော့တာပါ။ Reverse-Slope hearing loss (RSHL) ကို Low-frequency hearing loss လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ Dr.Lin … Read more
အရန်းမှန်လွန်းလို့မျှဝေလိုက်ပါတယ် စီးပွားရေး အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေသူများအတွက်ယတြာနဲ့ အစီရင်
မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္အဆင္မေျပျဖစ္ၿပီးကြဲမယ္လိုလိုျပတ္မယ္လိုလိုျဖစ္ေနပါသလား အိမ္ေထာင္ဖက္မွစိတ္ဆိုးစိတ္ေကာက္ၿပီးအိမ္ကေနအေဝးတစ္ေနရာကိုထြက္သြား၍ျပန္မလာတာမ်ိဳးၾကံဳေနရလား အိမ္ေထာင္ဖက္ေၾကာင့္အၿမဲလိုလိုစိတ္ညစ္ေနရ၍စကားမ်ားရန္ျဖစ္တာမ်ိဳး အႏိုင္က်င့္ဖိႏွိပ္ခံရတာမ်ိဳးေျခမၿငိမ္ျဖစ္ၿပီးေပြတာရႈပ္တာမ်ိဳးျဖစ္ေနပါသလာ းေနာက္မီးလင္းစနိႈက္ေက်ာ္ေၾကာင့္စိတ္ညစ္ေနရပါသလားအိမ္ေထာင္ဖက္မွ မိမိအိမ္မိသားစုအေပၚဂ႐ုမစိုက္အေလးမထားၿပီး အေပါင္းအသင္းမတ္ေနပါသလား ခ်စ္သူႏွင့္အဆင္မေျပေသာသူမ်ားလဲျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသင္ၾကံဳေတြ႕ေနရပါက ဤနည္းအတိုင္ယံုယံုၾကည္ၾကည္လုပ္ၾကည့္ပါေန႔နံအလိုက္ယၾတာမ်ားကိုေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ာ: းေျကာက္ဖရံုသီးတစ္လံုးေပၚကမိမိအိမ္ေထာင္ဖက္၏နာမည္ကိုထံုးျဖင့္ေရးပါၿပီးလွ်င္ေၾကာက္ဖရံုသီးေပၚတြင္ဖေယာင္းတိုင္(၃တိုင္)ဆိုက္ၿပီးမီးထြန္းေပးပါ ၉ရက္တိတိနံနက္ေနမထြက္ခင္ျပဳလုပ္ပါ တနလၤာသားသမီးမ်ား မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္၏အက်ႌဝတ္ၿပီးသာတစ္ထည္ကိုယူ၍ေရေမႊးစြပ္ပါျပီးလွ်င္(သနပ္ခါး)ျဖင့္အက်ႌေပၚတြင္မိမိနာမည္ကိုေရးၿပီးမိမိအိပ္ေသာေခါင္းအံုးေအာက္တြင္ထားၿပီး(၂၁ရက္)တိတိထားၿပီးအိပ္ပါ အဂၤါသားသမီးမ်ား ပန္းသီးတစ္လံုးေပၚတြင္မိမိရဲ႕အိမ္ေထာင္ဖက္၏နာမည္ကိုထံုးျဖင့္ေရးၿပီးဖေယာင္းတိုင္ခက္ႀကီးႀကီးတစ္တိုင္အေမႊးတိုင္(၃တိုင္)စ္ိုက္ၿပီးမီးထြန္းေပးပါအိမ္ဘုရားစင္ေပၚတြင္ျပဳလုပ္ပါ၈ရက္တိတိျပဳလုပ္ရမည္ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား ပန္းအိုးတစ္လံုးထဲတြင္ေအာင္သေျပ၁၁ခက္သစၥာပန္း၅ခက္ၿပီးလွ်င္ မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္ရဲ႕အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းတစ္ခုခုကိုပန္းအိုးထဲထည့္ၿပီးမိမိအိပ္ခန္းေထာင့္တစ္ေနရာတြင္ာ၁၁ရက္တိတိထားေပးပါ နံနက္၇နာရီတြင္ျပဳလုပ္ပါ ါျကာသပေတးသားသမီးမ်ာ: းေျမအိုတစ္လံုးယူပါယူၿပီးလွ်င္ အိမ္ေထာင္ဖက္၏ဆံပင္တစ္မွ်င္ဆန္းလက္တစ္ဆုတ္ႏွင္းဆီပန္းအနီေရာင္၅ပြင့္ထည့္ၿပီးပန္းကန္းျပာတစ္ခ်ပ္ျဖင့္ ပိတ္ပါၿပီးလွ်င္ဖေယာင္းတိုင္၅တိုင္စိုက္ၿပီးမီးထြန္းေပးပါ အိမ္ဘုရားစင္တြင္ျပဳလုပ္ပါနံနက္၆:၀၀မွ၇:၀၀အတြင္းလုပ္ပါ၉ရက္တိတိျပဳလုပ္ရမယ္ သာၾကာသားသမီးမ်ား မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္၏အက်ႌတစ္ထည္ကိုေရစြတ္ၿပီးမိမိအိပ္ခန္းတံခါးေပၚတြင္ေရမညစ္ဘဲခိ်တ္ထားပါတစ္ရက္တစ္ခါမနက္၅:၀၀ကေနညေန၅:၀၀ခ်ိတ္ထားရမည္ တစ္ရက္တစ္ခါ၁၅ရက္တိတိျပဳလုပ္ရမည္ စေနသားသမီးမ်ား ပုလင္းခြံ့တစ္ခုထဲတြင္မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္တြဲ႐ိုက္ထားေသာဓာတ္ပံုတစ္ပံုပန္းအျဖဴေရာင္ာ(၁ပြင့္)ထည့္ပါၿပီးလွ်င္ ထိုပုလင္းရဲ႕အပိတ္ကိုပိတ္ၿပီးအပိတ္ေပၚတြင္ဖေယာင္းတိုင္တစ္တိုင္စိုက္ၿပီးမီးထြန္းေပးပါမနက္၈နာရီတိကိုျပဳလုပ္ပါ ၁၀ရက္တိတိလုပ္ရမည္ဆရာဇြဲမင္းထက္မွေမတၱာေစတနာျဖင့္ကိုယ္တိုင္တြက္ခ်က္ေရးသာသည္အခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ားကို ဆရာႏွင့္တိုက္႐ိုက္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏိုင္ပါသည္ေဗဒင္ႏွင့္လကၡဏာဆရာဇြဲမင္းထက္ ဖုန္း၀၉-၄၃၁၁၀၆၂၄(viber) Credit – ဆရာဇြဲမင္းထက္ Unicode မိမိအိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အဆင်မပြေဖြစ်ပြီးကွဲမယ်လိုလိုပြတ်မယ်လိုလိုဖြစ်နေပါသလား အိမ်ထောင်ဖက်မှစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ပြီးအိမ်ကနေအဝေးတစ်နေရာကိုထွက်သွား၍ပြန်မလာတာမျိုးကြုံနေရလား အိမ်ထောင်ဖက်ကြောင့်အမြဲလိုလိုစိတ်ညစ်နေရ၍စကားများရန်ဖြစ်တာမျိုးအနိုင်ကျင့်ဖိနှိပ်ခံရတာမျိုးခြေမငြိမ်ဖြစ်ပြီးပွေတာရှုပ်တာမျိုးဖြစ်နေပါသလာ းနောက်မီးလင်းစနှိုက်ကျော်ကြောင့်စိတ်ညစ်နေရပါသလားအိမ်ထောင်ဖက်မှမိမိအိမ်မိသားစုအပေါ်ဂရုမစိုက်အလေးမထားပြီး အပေါင်းအသင်းမတ်နေပါသလားချစ်သူနှင့်အဆင်မပြေသောသူများလဲပြုလုပ်နိုင်ပါသည်အောက်ပါအကြောင်းအရာများကိုသင်ကြုံတွေ့နေရပါက ဤနည်းအတိုင်ယုံယုံကြည်ကြည်လုပ်ကြည့်ပါနေ့နံအလိုက်ယတြာများကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည် တနင်္ဂနွေသားသမီးမျာ: းကြောက်ဖရုံသီးတစ်လုံးပေါ်ကမိမိအိမ်ထောင်ဖက်၏နာမည်ကိုထုံးဖြင့်ရေးပါပြီးလျှင်ကြောက်ဖရုံသီးပေါ်တွင်ဖယောင်းတိုင်(၃တိုင်)ဆိုက်ပြီးမီးထွန်းပေးပါ ၉ရက်တိတိနံနက်နေမထွက်ခင်ပြုလုပ်ပါ တနင်္လာသားသမီးများ မိမိအိမ်ထောင်ဖက်၏အင်္ကျီဝတ်ပြီးသာတစ်ထည်ကိုယူ၍ရေမွှေးစွပ်ပါပြီးလျှင်(သနပ်ခါး)ဖြင့်အင်္ကျီပေါ်တွင်မိမိနာမည်ကိုရေးပြီးမိမိအိပ်သောခေါင်းအုံးအောက်တွင်ထားပြီး(၂၁ရက်)တိတိထားပြီးအိပ်ပါ အင်္ဂါသားသမီးများ ပန်းသီးတစ်လုံးပေါ်တွင်မိမိရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်၏နာမည်ကိုထုံးဖြင့်ရေးပြီးဖယောင်းတိုင်ခက်ကြီးကြီးတစ်တိုင်အမွှေးတိုင်(၃တိုင်)စိုက်ပြီးမီးထွန်းပေးပါအိမ်ဘုရားစင်ပေါ်တွင်ပြုလုပ်ပါ၈ရက်တိတိပြုလုပ်ရမည် ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ ပန်းအိုးတစ်လုံးထဲတွင်အောင်သပြေ၁၁ခက်သစ္စာပန်း၅ခက်ပြီးလျှင် မိမိအိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုပန်းအိုးထဲထည့်ပြီးမိမိအိပ်ခန်းထောင့်တစ်နေရာတွင်ာ၁၁ရက်တိတိထားပေးပါ နံနက်၇နာရီတွင်ပြုလုပ်ပါ … Read more
ဆယ်လီသတင်းတွေနဲ့ အချိန်ကုန်ပြီး အမေ့ကို သတိမရတဲ့ သူတွေကို ဒဲ့ပြောလိုက်တဲ့ ညီမလေး (ရုပ်သံဖိုင်)
ဆယ်လီသတင်းတွေနဲ့ အချိန်ကုန်ပြီး အမေ့ကို သတိမရတဲ့ သူတွေကို ဒဲ့ပြောလိုက်တဲ့ ညီမလေး (ရုပ်သံဖိုင်) နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမ္မတဦးဝင်းမြင့်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုတွေထဲက သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေပုဒ်မ ၂၅ နဲ့စွဲဆိုခံထားရတဲ့အမှုနဲ့ ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)တို့အတွက် မနက်ဖြန် နိုဝင်ဘာလ ၃၀ရက်မှာ အပြီးသတ်အမိန့်ချဖို့ရှိတယ်လို့ တရားရုံးနဲ့နီးစပ်တဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းက သိရပါတယ်။ မနက်ဖြန်မှာ အမိန့်ချဖို့ တရားရုံးက လျာထားတဲ့ သဘာဝဘေးစီမံအမှုဟာ ၂၀၂၀ မဲဆွယ်ကာလမှာ ဥတ္တသီရိမြို့နယ်ထဲဖြတ်သွားတဲ့ NLD မဲဆွယ်ယာဉ်တန်းကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သမ္မတဦးဝင်းမြင့်တို့က ထွက်ပြီးလက်ပြနှုတ်ဆက်လို့ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့စွဲဆိုခံထားရတဲ့အမှုပါ။ ကိုဗစ်ကာလအတွင်းလူစုလူဝေးဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့စွဲဆိုခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်အမိန့်ချမယ့် ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)အမှုကတော့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့ နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမျိုးအောင်တို့ ၃ ဦး လုံးတစ်ပေါင်းတည်းစွဲဆိုခံထားရတဲ့အမှုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ၃ ဦးလုံး ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အဲဒီအမှုဟာ အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ဖေဖော်ဝါရီ … Read more
ယနေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေနေတွေကြောင့် သရုပ်ဆောင်ယွန်းယွန်းတို့ ပြသာနာကြောင့် နိုင်ငံအရေးကို သတိမမူမိနေတဲ့ ပြည်သူတွေကို ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေ သတိပေးပါပြီ။ ပြည်သူတွေဟာ အခုဆိုရင် ယွန်းယွန်ရဲ့ ကာမကိစ္စလေး တစ်ခုကြောင့် ပြောရရင် ပေါ်ပင် လုပ်နေကြတာဟာ လပေါင်းများစွာ ပေးဆပ်ရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့ အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေး လုပ်ငန်းကြီးကို မေ့လျော့ လို့မရပါဘူး ဘာကြောင့်လဲ ကျွန်တော်တို့ ခေတ်အဆက်ဆက် ချုပ်ချယ်မူတွေနဲ့ အာဏာရှင်တွေရဲ့ နိုင်ငံအပေါ်အမြတ်ထုတ်မူကို ခံခဲ့ရတာ နှစ်ပေါင်းမနည်းတော့ပါဘူး အဲ့ဒီကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲဆိုပြီး ကြိုးပမ်း လုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ ပေးဆပ်ခံပြည်သူတွေမျက်နှာကိုရှေ့ရူဖို့ အခုလိုတိုက်တွန်းလာတာဖဲဖြစ်ပါတယ်။ ယွန်ယွန်းတို့ကိစ္စကိုပြောရရင် ဘာမှထူးဆန်းတာမပါဖဲ ယခုလို လူတိုင်းအရေးထားနေတဲ့ ကိစ္စဟာ လူတိုင်ကြုံဖူးနေကြတာဖဲ ဖြစ်ပြီး အဖြစ်ပျက်ကတော့ ဒီလိုလေးပါ” ချစ်သူရှိတဲ့ MRTV-4 သရုပ်ဆောင် စည်သူဝင်းနဲ့ ကြိတ်ပုန်းခုတ်နေတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့ … Read more
မှဲ့ကပြောပြတဲ့ သင့်ရဲ့အချစ်ရေးနှင့် အိမ်ထောင်ရေးအကြောင်း ပါးပေါ်ကမှဲ့ပိုင်ရှင် ရည်းစားရဖို့ ဘယ်တော့မှအောက်ကျမခံဘူး သေလောက်အောင်ချောနေလန်ထွက်နေပါစေ သဲသဲလှုပ်ချစ်မပြတတ်ဘူး ကိုယ်ကချစ်တဲ့သူထက် ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့ သူနဲ့ပဲ ဖူးစာပါရော။ နဖူးပေါ်ကမှဲ့ပိုင်ရှင် သနားတတ်တဲ့စိတ်အားနာတတ်တဲ့စိတ်ကြောင့် ချစ်သူတစ်ယောက်ရတတ်တယ်။အဲ့ချစ်သူကအနိုင်ယူတာခဏခဏငိုအောင်စိတ်ညစ်အောင်လုပ်တာကြုံရတတ်တယ်။ဒါပေမယ့်အဲ့ချစ်သူကပဲသင့်ကိုသစ္စာရှိရှိချစ်မယ့်သူဆိုတာမမေ့နဲ့။ မျက်ခုံးတစ်ဝိုက်ကမှဲ့ပိုင်ရှင် အချစ်စစ်ရဖို့အချိန်တွေမနည်းရင်းရတတ်တယ်စန်းပွင့်ပြီး လူချစ်လူခင်ပေါတယ် အသေရရအရှင်ရရချစ်ပြမယ့်သူတွေရှိလို့ ပတ်ဝန်းကျင်ကအားကျရတဲ့သူဖြစ်ချင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။တကယ်တမ်းအချစ်နဲ့ပက်သက်ရင် ကံနိမ့်တတ်တာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ သိတယ်။ မျက်လုံးအိမ်ထဲကမှဲ့ပိုင်ရှင် မာနကြီးတယ်ရည်းစားတစ်ယောက်ကို လွယ်လွယ်မထားတတ်ကျဘူးချစ်ပြီဆို တစ်ဘဝလုံးစာမုန်းပြီဆိုရင်လည်းသံသရာအဆက်ဆက်ပဲ။လမ်းခွဲရဲတဲ့နေရာမှာလည်းပြတ်သားရက်စက်တတ်တာ နှစ်ယောက်မရှိဘူး။ နားရွက်ပေါ်ကမှဲ့ပိုင်ရှင် ကတိတစ်ခုကိုတည်မှကြိုက်တယ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပိုင်ဆိုင်ထားကြတယ် ချစ်သူသက်တမ်းကြာရှည်စွာ ဖြတ်သန်းရတတ်တယ်။ပျော်ရွှင်စရာတွေဖန်ဆင်းပေးတတ်တဲ့ချစ်သူကြောင့် ဘဝတစ်လျှောက် ရင်ခုန်သံတွေဆူညံနေရလိမ့်မယ်။ နှာခေါင်းပေါ်ကမှဲ့ပိုင်ရှင် သာယာတယ်လေသိပ်ချစ်ပြတာ ကိုယ့်ဘက်ကပြန်ရတယ်လေ နောင်တတွေအပြုံလိုက်ငိုခဲ့ရလွန်းလို့ကျလိုက်တဲ့မျက်ရည်တွေရေအားလျှပ်စစ်ပါထုတ်လို့ရလောက်တယ် ဒါလည်းမှတ်လားမေးကြည့်လိုက်ပါဦး။ နှုတ်ခမ်းနားကမှဲ့ပိုင်ရှင် ဘယ်လိုနေနေလှနေရော။ဖျက်ခနဲရီလိုက်တာကသူတို့ရဲ့အားသာချက်လက်နက်ပဲအဲ့အပြုံးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့သူတိုင်းသေမလိုရှင်မလိုဖြစ်ကျန်ခဲ့တဲ့အထိညှို့ချက်ကပြင်းတယ်။လူတစ်ယောက်ကိုသိပ်ချစ်ခဲ့ဖူးပေမယ့် အဲ့လူကရက်စက်စွာဥပေက္ခာပြုခဲ့ခြင်းခံခဲ့ရဖူးတယ်။ လည်ပင်းနားကမှဲ့ပိုင်ရှင် ချစ်မယ့်သူတွေပေါတယ်။ ချောမောလှပတဲ့သူတွေဖြစ်ပေမယ့် ရည်းစားဆိုကိုယ့်ထက်ပိုချောတဲ့သူမရတတ်ကြဘူး။ အထူးခြားဆုံးကအသံစွဲမက်စရာဖြစ်နေတတ်တာ9+ပဲကိုယ့်ထက်အသက်ပိုကြီးတဲ့ကွီး/မွီးတွေကအသေအလဲကြွေခြင်းခံရတတ်တယ် မျက်ရည်အကျမလွယ်တတ်ဘူး။ Zawgyi မွဲ႔ကေျပာျပတဲ့ သင့္ရဲ႕အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးအေၾကာင္း ပါးေပၚကမွဲ႔ပိုင္ရွင္ ရည္းစားရဖို႔ ဘယ္ေတာ့မွေအာက္က်မခံဘူး … Read more
မကြာခဏလက်ဆစ်တွေ ချိုးဖူး သူတိုင်း ဒီပို့လေးကို ကျော်မသွားပါနဲ့အရေးကြီးလို့ပါ လက်ဆစ်တွေ ချိုးဖူး သူတိုင်း ဒီပို့လေးကို ကျော်မသွား ပါနဲ့အရေးကြီးလို့ပါလက်ဆစ်တွေချိုးဖူးသူတိုင်း ဒီပို့လေးကို ကျော်မသွားပါနဲ့ အရေးကြီးလို့ပါ သင်လက်ဆစ်တွေ ချိုးဖူးပါသလား အရေးကြီး တယ်နော် ။ လက်ဆစ်ချိုးတာက လက်ကို ထိခိုက် စေနိုင်ကြောင်း ပြောစမှတ် တစ်ခု ရှိပါတယ် လက်ဆစ်ချိုးရာမှ ထွက်လာတဲ့ အသံက သင့်အတွက် ဆိုးကျိုး ဖြစ်စေပါ သလား။ အဆစ်အမြစ် တွေဟာ လက်တွေ လှုပ်ရှားတဲ့ အခါ အရိုးဆစ်တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ပွတ်တိုက်မှု လျှော့နည်း စေတဲ့အရည် တစ်မျိုး synovial fluid ရှိရာ နေရာ ဖြစ် ပါ တယ် ။ သူ့မှာဂတ်စ် အောက်စီဂျင်နှိုက်ထရိုဂျင်နဲ့ ကာဗွန်ဒိုင် … Read more